Wararka Maanta: Jimco, Feb 19, 2021-DF iyo Midowga Musharixiinta oo siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkii xalay
War ka soo baxay Wasaarradda Amniga ayaa u dhignaa siddan '' "Malleeshiyaad hubaysan ayaa caawa saacadda markay ahayd 1-dii habeenimo (1am)soo weeraray baraha Ciidamada Qalabka Sida ay ku leeyihiin qaybo kamid ah caasimadda Muqdisho."
Laakiin dhinaca kale hoggaanka Midowga Musharixiinta oo hadallo kala duwan jeediyay ayaa dhamaantood si isku mid ah dowladda ugu eedeeyay dowladda in ay weerarkaasi soo qaadeen ciidanka dowladda.
Shariif Sheekh Axmed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa yirii “Waxaan umadda Soomaaliyeed u caddeynayaa in weerar gardarro ah ay nagu soo qaaday dowladda, iyagoo kusoo duulay Hoteelka Maa’ida oo aniga madaxweyne hore Xasan Sheekh iyo xubno kamid ah midowga murashaxiinta aan deganahay.
Wuxuu Shariif Sheekh Axmed ku eedeeyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu amray weerarkii xalay.
Sidaa si la mid ah waxaa weerarkan cambaareeyay daandaansi dagaalna ku tilmaamay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud, Shariif Xassan Sheekh Aadan, iyo Ra'iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xassan Cali Kheyre.
Afhayeenka Midowga Musharixiinta Daahir Maxamuud Geelle oo warbaahinta la hadlay dhankiisa warbaahinta ayaa sheegay in dibadbaxii ay ku baaqeen uu sidiisii yahay islamarkaana uu dhacayo saakay oo JImco ah, halka dhinaca kalana dowladdu mamnuucday Isku-imaatinka dadweyne.
Lama oga in saakay uu dhacayo dibadbaxa ay ku baaqeen mucaaradka iyo in kale, madaama isgoysyada dhamaan magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda oo xalay saqdii dhexe la soo dhiggay.